Towels nisaron-tava, Baby Towels, Royal Velvet Towels, lanezy Manufacturer - Bailixin
Hanitrika eto amin'izao tontolo izao ny manokana sy ny an-trano takatry lamba miaraka amin'ny orinasa! Manolotra towels izahay sy bodofotsy ho an'ny fianakaviana tsirairay amin'ny antonony vidiny.
Tsindrio ary mianatra momba antsika
Ny famoriam-bola nasongadina malefaka fandroana milentika lamba famaohana, lamba famaohana mangatsiatsiaka microfiber milentika fanatanjahantena sy ny tora-pasika towels, lamaody dakozia sy ny fandriana lamba famaohana milentika bodofotsy set.Comprehensive fikarakarana ho an'ny fahasalamana.
Mahasoa ny mifidy ny Bamboo lanezy
Efa mba nandre ny volotsangana bodofotsy? Izany dia vokatra tsara izay manome fampiononana be. Bodofotsy ireo dia vita amin'ny volotsangana malefaka hiringiriny fibre izay mahatonga azy ho fahafinaretana lehibe ho anareo mba snuggle in.Bamboo bodofotsy no tian'ny maro noho ny malemy ilay manjarano izay manome fampiononana kokoa. Bamboo dia malaza noho ny antibacterial fananana. Misy volotsangana Kun, izay voajanahary antibacterial mpandraharaha. Manana ny fahafahana mamono bakteria sy hanimba zavatra izay hampidi fandrahonana lehibe ho ara-pahasalamana.